Scooter Chitoro panzira yekuparara
Kukadzi 20 raifanirwa kunge riri zuva rakakura kune iyo Scooter Chitoro. Uye zvaive - nekuda kwechikonzero chisiri icho.
Vatungamiriri vekambani vaive nechivimbo chekuti vawana mukweretesi achida kugadzirisa zvemugoveri wemari anonetsa wemagetsi-kufamba zvishandiso uye scooter. Dare rebhengi rechikwereti muDallas rakagadzirirwa kuongorora chikwereti musi iwoyo.
Scooter Chitoro CEO Martin "Marty" Landon anga achingopeta musangano kuma9 mangwanani iwayo paakaona kubva kuhofisi yake yechitatu-gorosi mutema-uye-chena mutungamiriri wemauto sedan achitenderera pakambani yekupaka. General Zano Jasoni Cone akaudza Landon kuti achazviongorora, CEO akarangarira.
Cone isati yagona kudaro, vamiririri vatanhatu vemubatanidzwa vaive varipo kuzokwazisa Landon naCone sezvo vekupedzisira vakavhura musuwo.
"Uye nyika yedu yakapidiguka kubva ipapo kuenda mberi," Landon akadaro.
Kune iyo Scooter Chitoro, iyo yakanga yakura kuita indasitiri behemoth, kurwisa kwakabata cheni yezviitiko zvakaguma munaGunyana 13 neshoko rekuti kambani iri kubuda mubhizinesi. Mushure mokupamba, zvaive pachena kune vazhinji vaiona kuti zvaizoguma zvakashata kukambani.
Pakutanga, kunyanguvezvo, nyongano yakatonga.
"Ini, kutendeka kuna Mwari, ndakafunga kuti kwaive kutyisidzira kwebhomba," akadaro mushandi aisada kuzivikanwa. "Ndakatadza kufungidzira kuti chii chingaite kuti vanhu vapinde muchivako kudaro."
Vashandi vakarairwa kuti vabude muchivako, asi zvakakurumidza kuve pachena kuti kwaisave kutya bhomba. Vatungamiriri vakatorerwa mumahofisi akapatsanurwa - rimwe nerimwe rakachengetedzwa nemumiriri weFBI. Vakuru vacho havana kubvumidzwa kutaura kune mumwe nemumwe kana kushandisa nharembozha kwemaawa anotevera.
Zvakaratidza kuti kupaza kwedzimbahwe reScooter Store kwaive chikamu che Dhipatimendi Rezvemhosva kuferefeta, kunofungidzirwa kuve kune hukama ne Medicare uye kubiridzira kweMedicaid. Vamwe vamiririri zana nemakumi mashanu vakaburukira pamuzinda wekambani musi iwoyo. Vakuru havana kutaura zvakawanda nezve kuferefetwa kwavo, kuri kuenderera mberi. Asi Landon akati pane zvese zviri zviviri zvematsotsi pamwe nevezvematongerwo enyika muongororo iyi.
Iyo Scooter Chitoro yakanga yagara kwenguva refu ichisimbwa nerevo dzekuti vamwe vevatengi vayo vakapihwa simba-kufamba zvishandiso kunyangwe ivo vaisave nechido chekurapa. Chitoro, zvakare, chinoshanda muindasitiri iyo vakuru vehurumende vakati yazara nekubiridzira uye kubhadhara zvisina kukodzera.
Scooter Chitoro kushambadza kwakazadza masikati neusiku-husiku TV nemapaki kune vaoni kuti vazive kana vachikwanisa chimwe chezvigadzirwa "zvishoma kusvika hapana mutengo kwauri. "Izvi zvakakonzera kutsamwa kweinenge seneta weUS gore rapfuura.
Kurwiswa kwakaendesa kambani mune yakanyanyisa muswe muswe weiyo iyo yaisambokwanisa kuburitsa. Mukweretesi iyo yainge yakamisidzana nayo kupa mari akatsigira. Mapipi epingi akapiwa kune vazhinji vevashandi veScooter Store munaKurume. Kwapera mwedzi, kambani yakamirira kuchengetedzwa kwekubhuroka.
Asi iyo yekufa haina kuuya kusvika munaGunyana 11, apo kambani yakaziviswa kuti haichazobvumidzwa kuita bhizinesi neMedicare. Iyo yenyika inshuwarisi chirongwa chakaverengera ingangoita makumi manomwe neshanu muzana bhizinesi reScooter Chitoro.
Mazuva maviri tsamba dzasvika, iyo Scooter Store yakazivisa kuti ichave ichivhara uye "ichizadza" vazhinji vevashandi vayo vasara mazana matatu nemakumi matatu.
Pakati peavo vaizoenda paive naLandon, aimbove mukuru wezvemari weSan Antonio kambani inochengeta maronda Kinetic Concepts, uyo akange atorerwa basa neSchooter Store muna Nyamavhuvhu 2012 kuti aratidze shanduko.
Iyo kambani yaratidza kuti kuferefetwa kwakanangana nekutungamira kwepamberi uye kwete vashandi vaLandon. Nguva pfupi yadarika yakaisa zvinyorwa zvematare edzimhosva zvakaratidzika kunge zvinoratidzira vaimbova vatungamiriri Michael Clark uye Timothy Zipp zvinangwa.
"Kambani iyi yaive nepamusoro soro chimiro chemutengo pane zvavakaita nekuti yanga yakanangana nevatengi, "Landon akadaro." Pamusoro mutengo wekushambadzira. Yakakwira mutengo wekutenga vatengi. "Saka pakanga paine purofiti shoma yaiwira pasi."
Kunze kwekuferefetwa kweDhipatimendi reRuramisiro, an Auditor akazvimirira gore rapfuura akawana kuti iyo Scooter Store yakagamuchira pakati pemadhora 46.8 mamirioni uye $ 87.7 mamirioni mukubhadhara zvakanyanyisa.
Iyo kambani yakabvuma kubhadhara $ 19.5 mamirioni - iyo mari yaakaona kuti yakabhadharwa - asi chete mushure mekunge hofisi yemuongorori mukuru weUS Health and Human Services department yatyisidzira kubvisa kambani kubva muzvirongwa zvehutano zvehutano. Vatsvagiri vakaona kutadza kudzosera ipapo ipapo mari dzekubhadhara zvakawandisa dzakatyora chibvumirano chemakore mashanu "chibvumirano chekuvimbika" kubva muna 2007. Kambani yakapinda muchibvumirano chekugadzirisa mhosva akaita Manyepo Medicare anoti uye akabiridzira hurumende.
"Chitoro cheScooter chaive nemuchetura," akadaro Patrick Burns, mutauriri weVateresi Vanorwisa Kubiridzira muWashington. "Kana iwe ukava mucherechedzo une huturu mukunhuhwirira kwakashata, haingotariswi chete bhiri rega raunotumira, asi vanhu vanobhadhara zvikwereti vanotsvaga chikonzero chekutadza kuita bhizinesi newe."
Yekutanga Chinyorwa naMcClatchey News Service
Wepamusoro Wiricheya Blogs
Hurumende yeUS: YAKADZIDZWA KUSVIRA ZVIZVIZVI…